Ogaden News Agency (ONA) – Booliiska Addis Ababa oo Malaayiin Lacag Ah Qabtay.
Booliiska Addis Ababa oo Malaayiin Lacag Ah Qabtay.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in gacanta lagu soo dhigay malaayiin lacag ah iyo rag badan oo ganacsato ah oo lacagahaas kuhaystay guryahooda.
Sida xogta aan kuhelayno ciidanka Booliiska ee magaalada Addis Ababa ayaa maalin nimadii shalay oo Talaado ahayd baadhitaan xoogan kabilaabay xaafadaha magaalada Addis Ababa, waxaana lasheegayaa in ay booliisku abeereen goobo bartilmaameed ah.
Warka ayaa intaas kudaraya in ay Booliisku gacanta kusoo dhigeen Malaayiin lacago ah oo Dooller iyo lacago kale oo qalaad isugu jira, lacagahaas oo si sharci daro ah loogu haystay xaafadaha, waxayna Booliisku gacanta kusoo dhigigeen 37 qof oo ganacsato ah kuwaas oo lacagahaas haystay.
Ganacsatada ree Itoobiya ayaa lasheegayaa in ay lacagahooda gaysteen guryahooda kadib markii maamulkii bahalka ahaa ee wayaanaha ee dhacay ay ku aamini waayeen hantidooda taas oo keentay dhibaato dhinaca dhaqaalaha ah oo aad ubaahsan.
Dhinaca kale saraakiishii kooxda TPLF ee talada wadanka haysay ayaa si badheedh ah udhacay bangiyada iyo hantida umada, waxaana larumaysan yahay in lacagahaas inta badan lagu shubay dibada halka lacago kale oo badana lagu hayo gudaha Itoobiya.
Lacagahan lagu xayiray guryaha iyo kala oloolaysiga dhinaca dhaqaalaha ah ayaa keenay sicir barar aad ubaahsan oo guud ahaan wadanka kadhacay iyo lacagihii adkaa oo wadanka laga waayay sida Doollerkii oo noqday mid aad qaali u ah.
Isku soo wada duub oo lacagahan ay Booliisku sooqaqabteen ayaan la ogayn in ay wax katari doonaan dhaqaalaha wadanka ee dhulka galay iyo miciishada qaaliga ah.